रुसले तयार गरेको कोरोना भ्याक्सिनलाई लिएर नेपालमा आयो अहिले सम्मकै खुसिको खबर ! – AB Sansar
October 1, 2020 adminLeaveaComment on रुसले तयार गरेको कोरोना भ्याक्सिनलाई लिएर नेपालमा आयो अहिले सम्मकै खुसिको खबर !
रुसले तयार गरेको कोरोना भ्याक्सिनलाई लिएर नेपालमा आयो अहिले सम्मकै खुसिको खबर ! काठमाण्डौ – नेपाललाई २ करोड ५० लाख कोरोनाविरुद्ध खोप (स्पुत्निक भी)को डोज दिन रुसको स्वतन्त्र सम्पत्ति कोषल तयार भएको छ । ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्समार्फत नेपाललाई सो संख्यामा कोरोनाविरुद्ध खोपको डोज दिने रुसी सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका छन् । ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्स निजी स्वास्थ्य सेवा फर्म र रुसको औषधिको महत्त्वपूर्ण वितरक हो । *** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
त्यस्तै, यसअघि आरडीआईएफले मेक्सिकोसँग ३२ मिलियन डोज, ब्राजिलसँग ५० मिलियन डोज, भारतसँग १०० मिलियन डोज र उज्बेकिस्तानसँग ३५ मिलियन डोज भ्याक्सिनको लागि सम्झौता गरिसकेको बताइएको छ । रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ११ अगस्टमा विकास भएको यस खोपलाई मानव एडिनोभाइरल भेक्टर प्लेटफर्ममा आधारित कोरोनाविरुद्धको विश्वमा दर्ता भएको पहिलो खोप भएको दाबी गरिएको छ ।
बोक्सीको आरोपमा रतुवामाईकी वृद्धा महिलामाथि निर्घात कुटपिट